App Store | အိုင်ဖုန်းသတင်း
La အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Apple က App Store ကို ၎င်း၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်၎င်းသည် iPhone နှင့် iPod Touch နှင့်နောက်ပိုင်း iPad တို့၏အောင်မြင်မှု၏အကြောင်းရင်းအမှန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ဤစတိုးတွင်သင် GPS လမ်းညွှန်မှဂိမ်းများအထိ၊ အရာရာတိုင်းအတွက်အသုံးချဆော့ဝဲလ်များကိုလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ အားကစား၊ သတင်းများစသဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထဲမှာ အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး သန်းထောင်ချီတဲ့လျှောက်လွှာတွေကိုတွေ့ရတယ်၊ တချို့ကအခမဲ့ဖြစ်တယ်၊ တချို့ကိုလခပေးရတယ်။ ဤအပိုင်းတွင်သင်ဤစတိုးဆိုင်ပြောင်းလဲမှု၊ ၎င်း၏သတင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအားလုံးကိုပြသပါမည်။
ကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းထားသောချတ်များထံမှ WhatsApp အကြောင်းကြားစာများကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါ
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ပေါင်း .
အမေဇုံကြောင့်အက်ပဲလ်သည်အက်ပ်စတုတ်ကို AppStore မှထုတ်ပယ်
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
AR Tour Ocean သည်သင့်ကို iPhone မှပင်လယ်အောက်ခြေသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရရှိနိုင်သော application အရေအတွက်နှင့် ၄ င်းတို့ပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်အံ့အားသင့်ရန်ခက်ခဲသည်။
TikTok သည်ဗီဒီယိုအရှည် ၃ မိနစ်အထိတိုးသည်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
မနေ့ကပဲ TikTok အပလီကေးရှင်းကအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့အတွက်သုံးစွဲသူများကဖြန့်ချိမှုမှတ်စုများကိုမြင်နိုင်ပါပြီ။
လောလောဆယ် Tado application ၏ version မှာ 6.8.1 ဖြစ်ပြီးတိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းထားသည်။
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
Emojis, Gifs၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်စတစ်ကာများအကြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့စကားဝိုင်းထဲသို့ဝင်သောအခါပုံမှန်ဖြစ်သည်။
iOS 15 သည်သုံးစွဲသူများအားအက်ပ်များမှ in-app ဝယ်ယူမှုများအတွက်ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်သည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
အပလီကေးရှင်းများအတွင်းမှ in-app ဝယ်ယူမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေဘုံအရာတစ်ခုနှင့်ပျောက်ကွယ်သွားပုံမပေါ်ပါ။
သင့် iPhone မှဒုတိယသို့အလင်း၏စျေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ပါ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဇွန်လ ၁ ရက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခဈေးနှုန်းအသစ်ကျဆင်းသွားသည်။
Apple Office suite: Pages, Numbers နှင့် Keynote ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Cupertino ကုမ္ပဏီသည် ၄ ​​င်း၏ iWork ရုံးအစုံအလင်ကိုအသစ်တင်လိုက်သည်။ ဤကိစ္စတွင် iOS အတွက်မူကွဲများအပြင် ...
iPhone အတွက်အကောင်းဆုံး wallpaper နောက်ခံ ၈ ခု
အိုင်ဖုန်းကနေ App Store ကနေငွေပြန်အမ်းတာကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုမလဲ
သင်၏ Apple ID စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်
ဂူဂဲလ်ဒရိုက်ကသင့်အားလုံခြုံရေးအတွက်ဂဏန်း ၄ လုံးပါသောကုဒ်တစ်ခုချရန်ခွင့်ပြုသည်
သင်၏ငွေကို iTunes တွင်မည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း